Izici ze-Web Scraper - Uchwepheshe we-Semalt
I-Web scraper isandiso sesiphequluli se-Chrome esenzelwe ukukhipha idatha kumakhasi wewebhu . Ngalesi sandiso, ungakha i-sitemap noma i-plan, ekhombisa indlela efanele kakhulu yokuhamba isayithi bese ususa idatha kuyo.
Ukulandela i-sitemap yakho, i-Web Scraper izohamba ngekhasi lesayithi lomthombo ngemuva kwekhasi futhi ilandele okuqukethwe okudingekayo. Idatha ekhishiwe ingathunyelwa njenge-CSV noma amanye amafomethi. Ngaphandle kwalokho, lesi sandiso singafakwa kusuka ku-Chrome Isitolo ngaphandle kwanoma iyiphi inkinga.
Ezinye zezici zeWeb Scraper zikhonjiswe ngezansi
Amandla okukhipha amakhasi amaningi
Ithuluzi linamandla okukhipha idatha kusuka eziningana amakhasi wewebhu ngesikhathi esisodwa uma kukhonjisiwe kulesi sithombe. Uma udinga ukukhipha zonke izithombe kusuka kuwebhusayithi engu-100, kungase kube isikhathi esiningi kuwe ukuze uhlole amakhasi ngamunye futhi wazi ukuthi yiziphi izithombe eziqukethe izithombe nokuthi aziphi. Ngakho-ke, ungafundisa ithuluzi ukuhlola wonke amakhasi ezithombe.
Ithuluzi ligcina idatha ku-StochDB noma isitoreji sendawo yesiphequluli
Ithuluzi ligcina izindawo zokuhlala kanye nedatha ekhishwe noma kwisitoreji sendawo sesiphequluli noma i-CouchDB
Njengoba ithuluzi lingasebenza ngezinhlobo eziningi zedatha, abasebenzisi bangakhetha izinhlobo eziningi zedatha yesikhumba ekhasini elifanayo. Isibonelo, kungasusa kokubili izithombe nemibhalo kusuka kumakhasi wewebhu ngesikhathi esisodwa.
Dweba idatha kusuka kumakhasi ashukumisayo
Ithuluzi ivumela abasebenzisi ukubuka idatha ekhishwe ngisho nangaphambi kokuba igcinwe endaweni ekhethiwe
Ithengisa idatha ekhishwe njenge-CSV
I-Web Scraper exports ekhishwe idatha njenge-CSV ngokuzenzakalelayo, kodwa ingayithumela nakwamanye amafomethi. )
Ukuthengiswa kwempahla nokuthengiswa kwe-sitemaps
Kungase kudingeke ukuthi usebenzise ama-sitemaps izikhathi eziningi ukuze ithuluzi lingenise futhi lithumele izindawo zokuhlala ngesicelo.
Isiphequluli se-Chrome kuphela
Ngeshwa, lokhu kunalokho kube yimpendulo eyinzuzo. Isebenza kuphela ngesiphequluli se-Chrome.
Amanye amathuluzi okukhipha idatha
Loluhlaka lungasetshenziselwa ukukhipha yonke into okuqukethwe kwe-website yakho. Ukukhipha okuqukethwe akuyona umsebenzi wayo kuphela. Kungasetshenziswa futhi ukuhlolwa okuzenzakalelayo, ukuqapha, ukuchithwa kwedatha, ukukhwabanisa kwewebhu, ukukhipha isikrini, nezinye izinhloso eziningi.
Ungasebenzisa futhi i-Wget ku-sc ukudlwengula i-website yonke kalula. Kodwa kukhona ukungafani okuncane nale thuluzi, akukwazi ukuqeda amafayela e-CSS.
3. Ungasebenzisa futhi umyalelo olandelayo ukukhipha okuqukethwe kuwebhusayithi yakho ngaphambi kokuyihlukanisa:
) ifayela_put_contents ('/ ezinye / isiqondisi / scrape_content.html', file_get_contents ('https://google.com')) ; Source .